လမ်း/တံတားအသုံးပြုခအဖြစ် ပေးချေသောငွေအကြွေကိုမယူသည့် ဂိတ်ကြေးကောက်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး အလု?? - Yangon Media Group
လမ်း/တံတားအသုံးပြုခအဖြစ် ပေးချေသောငွေအကြွေကိုမယူသည့် ဂိတ်ကြေးကောက်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး အလု??
ရန်ကုန်၊ မတ် ၉- လမ်း/တံတား အသုံးပြုခအဖြစ် ပေးချေသော ၅ ကျပ် တန် ၁ဝ ရွက်ကို မယူသည့် တိုးလ်ဂိတ် လမ်း/တံတားကြေးကောက် ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီး အလုပ်ထုတ်ခံရကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်သည် သော်တာဝင်းကုမ္ပဏီမှ B.O.T စနစ်ဖြင့် တာဝန် ယူ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း (မိတ္တီလာ-မန္တ လေးအပိုင်း)၊ သပြေဝတိုးလ်ဂိတ်သို့ မတ် ၃ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၃၄ မိနစ် အချိန် အိမ်စီးကားတစ်စီးသည် မန္တလေးမှ ရန်ကုန်ဘက်သို့သွားသည့် Lane (၄)တွင် ရောက်ရှိလာပြီး လမ်း/တံတားအသုံးပြုခအဖြစ် လမ်းအသုံးပြုခ ကျပ် ၂ဝဝ နှင့် စမုံ၊ ဒါန်းချောင်းတံတား(၂) အဆင်း အသုံးပြုခ ကျပ် ၂ဝဝ၊ စုစုပေါင်း သင့်ငွေ ကျပ် ၄ဝဝ ပေးချေရာတွင် ယာဉ်ပေါ်ပါအမည်မသိ အမျိုးသမီးမှ လမ်း/တံတား အသုံးပြုခအဖြစ် ၂ဝဝ ကျပ်တန် တစ်ရွက်၊ ကျပ် ၁ဝဝ တန် တစ်ရွက်၊ ၅ဝ ကျပ်တန် တစ်ရွက်နှင့် ၅ ကျပ်တန် ၁ဝ ရွက်တို့အား ပေးဆောင် ရာတွင် တိုးလ်ဂိတ်ဝန်ထမ်းဖြစ်သည့် ငွေကောက်တာဝန်ကျ မခင်သန့်ဇင်ဆိုသူ မှ ”၅ ကျပ်တန်များ မယူနိုင်ကြောင်း အခြားနေရာတွင် သွားသုံးပါ”ဟု ပြော ကြားခဲ့ရာ အချေအတင် အငြင်းပွားသည့်ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း မတ် ၉ ရက်က ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့် တိုးလ်ဂိတ်တာဝန်ခံများက ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု မဖြစ်ပေါ်စေရန် အရန် Lane ဖွင့်ပေးခဲ့ပြီး လမ်း/တံတား အသုံးပြုသူမှပေး သည့် ငွေအြေ<ွကများကို လက်ခံ၍ ပြေစာဖြတ်ပိုင်းပေးရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၄၄ မိနစ်အချိန်တွင် အဆိုပါ မော်တော်ယာဉ်ကို ဖြတ် သန်းစေခဲ့ပါကြောင်း၊ ဖြစ်စဉ်ကို စစ်ဆေးရာတွင် ငွေကောက်တာဝန်ကျ ဝန် ထမ်း၏ အမြင်မကျယ်မှု၊ ဖြေရှင်းပုံနည်းလမ်း မှားယွင်းမှုတို့ကြောင့် ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ အဆိုပါဝန်ထမ်းကို အလုပ်မှထုတ်ပယ်ပြီး အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ”B.O.T ပေးထားတဲ့ လမ်း/တံတားတွေနဲ့ ပတ် သက်ပြီး ဂိတ်ကြေးကောက် ဝန်ထမ်းတွေကို စီမံခန့်ခွဲတဲ့အပိုင်းက သက်ဆိုင် ရာ ကုမ္ပဏီတွေကပဲ ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ လမ်း/တံတား အသုံးပြုတဲ့ ခရီးသွားပြည်သူတွေ အဆင်ပြေစေဖို့ B.O.T တင်ဒါအောင် ကုမ္ပဏီတွေကို ဘယ်လို ညွှန်ကြားထားလဲဆိုတော့ တင်ဒါအောင်စဉ်က သဘောတူ ချုပ်ဆို ခဲ့တဲ့ စာချုပ်ပါအတိုင်းပါပဲ။ အခု တိုးလ်ဂိတ်ဝန်ထမ်း အရေးယူခံရတဲ့ ဖြစ်စဉ် ကလည်း ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ဘဲ သူတို့အပိုင်းနဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားတာ ဖြစ် ပါတယ်။ ဒါကို ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကတော့ သတင်းထုတ်ပြန်ပေးတာပါ”ဟု ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးဇော်မင်းသိန်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေး၏ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကို မတ် ၉ ရက်ကပြောသည်။
ယင်းအပြင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်လည်း နောင်တွင် အလားတူအ ဖြစ်မျိုး မဖြစ်ပွားစေရန် တိုးလ်ဂိတ်များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် ဝန်ထမ်း များအား မွမ်းမံသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားစေခြင်း၊ ခရီးသွားပြည်သူများ နှင့် ဆက်ဆံရာတွင် အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရေးတို့အတွက် တာဝန်ရှိသူ အဆင့် ဆင့်မှ စစ်ဆေးကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပါရှိသည်။
အဆိုပါတိုးလ်ဂိတ်ဝန်ထမ်း၏ ၅ ကျပ်တန် ၁ဝ ရွက် မယူနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်သည် လူမှုကွန်ရက်များတွင် ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီးနောက် သက် ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှ ယခုကဲ့သို့ အရေးယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပါဝင်ရန် ယာယီရပ်ဆိုင်းထားသည့် KNU နှင့် RCSS တို့ မကြာမီ ပြန?
ပြိုင်ဘက်မျက်နှာကို တံတွေးဖြင့် ထွေးခဲ့သော ကော်စတာ ပြန်တောင်းပန်
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ဖုန်မှုန့်များ ထူထပ်စွာ ကျရောက်ပြီး လေထု ညစ်ညမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်